Zimbabwe Drone Laws (2022)
Img 1: Aerial Photography In Zimbabwe
General Zimbabwe Drone Laws
Drone Permits In Zimbabwe
Buying Drones In Zimbabwe
General Zambia Drone Laws
Drone use with a permit is allowed in Zimbabwe, but there are several drone laws that need to be followed when flying in the country. Operators must ensure that they follow the following drone laws when flying in Zimbabwe,
A permit is required for recreational drone use in Zimbabwe.
Operation of drones in Zimbabwe is not yet permitted for foreign operators, all foreign operators who wish to apply for a permit in Zimbabwe will require the following authorizations:
-Authorization from The Zimbabwe Revenue Authority
-Authorization from Aviation Authorities.
Click here to get assistance on how to obtain a permit, or contact the local aviation authority. (What Is Recreational Drone Use?)
A permit is required for commercial drone use in Zimbabwe.
Operation of drones in Zimbabwe is not yet permitted for foreign operators, all foreign operators who wish to apply for a special permit in Zimbabwe will require the following authorizations:
-Special approvals for operation of drones from the Ministry of Defense
Click here to obtain assistance on how to get a permit, or contact the local aviation authority. (What Is Commercial Drone Use?)
Here is some video footage shot by John Webb when flying a drone in Zimbabwe.
Read all of our Zimbabwe Drone Laws, and now looking for drones, parts, accessories, or something else? Read our guide for Buying Drones In Zimbabwe. It includes information on drones for sale in Zimbabwe, import taxes, payment options, and shipping.
Zimbabwe drone laws are up to date as of June, 2019. Please email [email protected] , or click “leave a message” at the bottom right of the screen if you have any questions or comments.